George Weah Child Story Story Ihe omuma
Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm
Ndị egwuregwu bọọlụ Croatian
Ndị egwuregwu egwuregwu Czech Republic
Ndị egwuregwu bọọlụ Danish
Ndị egwuregwu bọọlụ France
Ndị egwuregwu bọọlụ German
Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland
Ndị egwuregwu bọọlụ nke Cameroon
Ndị egwuregwu bọọlụ Ghanian
Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Columbian
Ndị egwuregwu bọọlụ Uruguayan
Ndị egwuregwu bọọlụ Canada
Kedu ihe kpatara Akụkọ nwata
Ihe Mere Ezighi Anye Ọmụmụ Biography
AllNdị egwuregwu bọọlụ BekeeNdị egwuregwu bọọlụ Welsh
Nick Pope Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Eberechi Eze Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Eddie Nketiah Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
AllNdị egwuregwu bọọlụ na BeljọmNdị egwuregwu bọọlụ CroatianNdị egwuregwu egwuregwu Czech RepublicNdị egwuregwu bọọlụ DanishNdị egwuregwu bọọlụ DutchNdị egwuregwu bọọlụ FranceNdị egwuregwu bọọlụ GermanNdị egwuregwu bọọlụ ItaliantaliNdị egwuregwu bọọlụ PortugueseNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ SpanishNdị egwuregwu bọọlụ Switzerland
AllNdị egwuregwu bọọlụ nke CameroonNdị egwuregwu bọọlụ GhanianNdị egwuregwu bọọlụ Ivory CoastNdị egwuregwu bọọlụ NigeriaNdị egwuregwu bọọlụ Senegalese
Edouard Mendy Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Andre Onana Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Samuel Chukwueze Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Habib Diallo Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography
AllNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ ArgentineNdị egwuregwu bọọlụ BrazilNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ ColumbianNdị egwuregwu bọọlụ Uruguayan
Emiliano Martinez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akụkọ banyere Angel Correa Child Plus Ihe Na-adịghị Ekeresimesi Eziokwu
AllNdị egwuregwu bọọlụ Canada
Jonathan David Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Giovanni Reyna Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Alphonso Davies Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography Eziokwu
Nwa akwukwo Christian Pulisic Story Plus ihe omuma ihe omuma
AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ ASIAN
Faiq Bolkiah Akụkọ nwata na gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Takumi Minamino hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eme Ihe Ugwu Na-adịghị Eke Ndụ
Caglar Soyuncu hoodmụaka Akụkọ Ngwakọta Eziokwu Untold Biography
Takefusa Kubo Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ
Chris Wood nwata akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Mile Jedinak Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ihe Na-adịghị Agbanwe
Ụmụaka Aaron Mooy Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Tim Cahill Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ụmụaka Mark Viduka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Home EGO AFRICAN FOOTBALL George Weah Child Story Story Ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Football and President nke kacha mara amara na aha njirimara; 'Eze George'. Ụmụaka anyị George Weah na akụkọ akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha ahụ na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, ndụ mmekọrịta na ndị ọzọ na-ewepụ ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ballon d'ma ọ bụ ọrụ isi oche Liberia mana ole na ole na-atụle akụkọ George Weah nke dị ezigbo mma. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
George Weah Child Story Story na -Ndụ mbido
George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah mụrụ na 1st October 1966 (afọ 51), Monrovia, Liberia.
Ọ bụ nne nne ya zutere George mgbe nna ya nwụsịrị. Ọ tolitere na West Point, bụ ebe a na-eji arụ ọrụ nke ndị òtù obodo. Ọ bụ onye so na Kru agbụrụ, nke si na ndịda ọwụwa anyanwụ Liberia pụta Nnukwu Kru County, otu n'ime ebe kacha daa ogbenye na mba ahụ.
Aha George Weah Child Story
Ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Muslim Congress na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na wells Hairston High School ma kwuo na ọ kwụsịrị n'afọ ikpeazụ nke ọmụmụ ya. Ọ malitere igwu bọl maka nwa okorobịa na-eto eto Young Survivors mgbe ọ dị afọ 15 ma mesịa kwaga na klọb football ndị ọzọ, na-ewere ọrụ dị iche iche maka Ike Barrolle na Invincible Eleven ebe o weere 24 ihe mgbaru ọsọ na 23.
Mgbe ha rutere ebe ndị ha na-amakarị, otu Cameroon scout hụrụ ya ma banye ya maka isi ụlọ dị na mpaghara ya, bụ Yaound n'akụkụ FC. Cameroon scout Claude Le Roy, bughariri akụkọ banyere ikike nke Weah ka onye na-eduzi AS Monaco njikwa Arsène Wenger. Wenger gbabara Afrika ka ọ chọọ onwe ya, wee banye Weah na ụlọ ya.
Tupu ọrụ football ya nyere ya ohere ịkwaga mba ọzọ, Weah rụrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Liberia Telecommunications Corporation dị ka a onye na-arụ ọrụ na kọmputa. Ọ ghọrọ onye mbụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị, Liberia ka ọ bụrụ akara na Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
George Weah Child Story Story na -Ndụ mmekọrịta
Clar Weah bụ nwunye nke George Weah. Ọ bụ onye amaala United States nke America nwa amaala na nne na nna mgbọrọgwụ na Jamaica.
George na Clar
O tolitere na Florida, United States, ebe ọ na-agba ọtụtụ ụlọ ahịa gụnyere ụlọ ahịa Caribbean na-eri nri na ụlọ ahịa.
Dị ka akụkọ si kwuo, George na Clar zutere na United States na ngalaba ụlọ ọrụ Chase Bank ebe Clar na-arụ ọrụ dịka onye ọrụ ndị ahịa. Onye na - egwu AC Milan mbụ ahụ kwuru na ọ gara ụlọ akụ iji mepee akaụntụ mgbe anya ya hụrụ Jamaican mara mma. Akụkọ ịhụnanya ha na-agbasi ike ma nọgide na-etowanye ike n'agbanyeghị ọtụtụ asịrị nke ekweghị ekwe trailing Weah.
Clar, bụ onye n'adịghị ka ọtụtụ ndị inyom nke Caribbean, ejiji naanị, a na-ewere na ọ bụghị naanị dịka onye na-agba ume ma ọ bụ dị egwu nke ọma, nke na-egbuke egbuke ọbụna mgbe oge siri ike nwere ike imebi ihe mgbochi. Ndị enyi ya na-akọwa ya dị ka ọgụgụ isi na inwe ụdị pụrụ iche nke Ahu. Jamaican nwere ikike dị ukwuu n'akụkụ di ya. Ha abụọ nwere ụmụ atọ: George Weah Jr, Tita na Timothy.
Timothy Weah, nwa 1995 Ballon d'Or, onye na-eto eto George Weah, debanye aha ya na Paris Saint-Germain.
George Weah nwa-Timothy
Onye 17 dị afọ na-agbaso nzọụkwụ nke nna ya, bụ onye nọrọ afọ atọ na Ligue 1, tupu ya akwaga AC Milan. Timothy sonyere PSG's academy na 2014 ma gosipụta maka U-15 na U-19s.
George Weah Child Story Story na -Ndụ Ezinụlọ
Nna ya, William T. Weah, Sr. bụ ígwè mgbe nne ya, Anna Quayeweah bụ onye ahịa. O nwere umu nwoke ato, William, Moses na Wolo.
George Weah bụ otu n'ime ụmụ iri na atọ nke nne na nna ya bụ ezigbo nne na nna kwalitere, Emma Klonjlaleh Brown mgbe nne na nna ya kewara.
George Weah Child Story Story na -Ọganihu Europe
Ee, ọ bụ ezigbo talent na obere ọzụzụ ọzụzụ. Weah pụtara na ọ bụ na mbụ ọrụ ya na Europe. Otú ọ dị, 6'2 ahụ dị ike "na-eme ngwa ngwa wee merie asọmpi ahụ ma ghọọ onye nrịta mgbaru ọsọ dị egwu.
Otu njem na Paris Saint-Germain wetara otuto maka Weah, bụ onye nyeere klọb aka merie French Cup na 1993 na aha Ligue 1 na 1994. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkọwa n'oge 1994-95 oge, ọ na-eburu PSG gaa n'asụsụ French na Ligue Cup na mmeri ma rụchaa dị ka onye na-eduzi Njikọ nke Njikọ. Mgbe afọ ahụ gasịrị, a kpọrọ ya ndị Africa, European na FIFA World Player of the Year-ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya.
George Weah Child Story Story na -agha
A machibidoro anyị iwu site na egwuregwu isii nke Europe maka ịgbaji onye agbachitere Portuguese Jorge Costa na 20 November 1996 n'ọgbọ egwuregwu mgbe Milan rutere Porto na Njikọ Njikọ. Weah kwuru na ọ gbawara na nkụda mmụọ mgbe ọ kwụsịrị ịkwa nkịta agbụrụ Costa n'oge egwuregwu abụọ nke Njikọ Njikọ na mgbụsị akwụkwọ.
Costa kwadoro ebubo nke ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụghị ebubo na UEFA enweghị ebubo na ọ nweghị ndị akaebe nwere ike ịchọpụta ebubo nke Weah, ọbụghị ndị òtù ya na Milan. Mgbe e mesịrị, anyị gbalịrị ịrịọ mgbaghara Costa ma rịọ mgbaghara nke ndị Portuguese, bụ ndị weelere ebubo nke mkparị agbụrụ na-emegide ya ka ọ bụrụ onye nkwutọ ma were Liberia gaa n'ụlọ ikpe.
Ihe ahụ merenụ dugara na Costa ka ọ na-aga ịwa ahụ ihu ma mechie ya ruo izu atọ. N'agbanyeghị ihe ahụ merenụ, Weah ka na-enweta FIFA Fair Play Award na 1996.
George Weah Child Story Story na -Religion
Anyị wepụtara site na Protestant Christianity ka Islam, tupu ịgbanwere azụ. Ọ na-atụ anya udo maka ndị Alakụba na Ndị Kraịst, ma kwuo na ha bụ "Otu ndị".
Weah emeela Protestantism.
N'October 2017, a hụrụ ya na chọọchị a ma ama nke Nigeria na pastọ TB Joshua tinyere Senator Prince Yormie Johnson.
TB E kwuru na Jọshụa bụ isi ihe dị mkpa na mkpebi Johnson ka ọ kwadoro ikike ọchịchị Weah na nhoputa ndi ochichi 2017 Liberia.
George Weah Child Story Story na -Ezi Nwa nke Liberia
Weah malitere itinye aka na ihe omume obodo ya nke agha-agha tisasịrị ka ọ ka nọ na-arụ ọrụ.
N'ịghọta mkpa nke bọọlụ dị ka ike na-eguzosi ike na Liberia, Weah ji $ 2 nke ego nke aka ya na njem, ngwá ọrụ na ụgwọ ụgwọ maka ndị otu mba, ndị Lone Stars.
George Weah Child Story Story na -Personality
George Weah nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: George Weah bụ ndị na-akwado, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị nwere obiọma, ndị nwere ezi uche, ndị na-elekọta mmadụ
Ajọ: George Weah nwere ike ịbụ mkparị ma nwee ọmịiko onwe ya. Ọ ga - eme ka ọ ghara izere esemokwu ma nwee ike iwe iwe.
Ihe George Weah nwere mmasị: Mmetụta, ịdị nwayọọ, ikerịta ndị ọzọ na n'ikpeazụ, ndụ a na-apụ apụ.
Ihe George Weah achọghị: Ime ihe ike, ikpe na-ezighị ezi, oké ụda olu na nkwekọrịta.
N'okwu ọ bụla, George nwere udo, dị mma, na-akpọkwa asị na ọ bụ naanị ya. Mkpakọrịta dị ezigbo mkpa maka ya.
George Weah Child Story Story na -Ọchịchị
George Weah gbara ọsọ maka onyeisi oche Liberia dịka onye so na Congress for Democratic Change na 2005, mana ọ tụfuru Ellen Johnson Sirleaf nke Unity Party. Na 2011, ọ nọkwa na tiketi CDC, oge a dị ka onye isi oche, ma Sirleaf nọgidere n'ọfịs.
Enweghị agụmakwụkwọ na-agụghị anyị na-agbasa ozi. Ọ na-akatọ ndị na-ekwu na ya erughi ịchị achị. O bu ụzọ kwuo na ya ga-enwe akara BA na Management Sports na Parkwood University na London, Otú ọ dị, nke a bụ mịịlị a na-amaghị ihe ọ bụla nke na-enye akwụkwọ ikike n'enyeghị akwụkwọ. Mgbe ahụ, anyị na-agbaso akara n'ọchịchị azụmahịa na DeVry University na Miami.
N'agbanyeghị mmezigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Weah na-anọgide na-enwe mmetụta dị ịrịba ama na onye a ma ama na obodo ya. Na April 2016, Weah kwuru ọkwa ya na ọ ga-agba ọsọ maka President nke Liberia maka oge nke abụọ. Egwuregwu nke Football Chineke mechara bụrụ onyeisi oche Liberia na December 2017 mgbe o merisịrị Onye isi oche Joseph Boakai.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị George Weah Ụmụaka akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Achịkọ Njem Monaco
Odsonne Edouard Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Yacine Adli Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Dan-Axel Zagadou Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Krzysztof Piatek Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ
Allan Saint-Maximin Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Lucas Digne Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Ụmụaka gị na Tielemans Akụkọ Nke Na-emeghe Eziokwu
Gianluigi Donnarumma Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Ụmụaka Thilo Kehrer Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL
Thomas Tuchel Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Gbanwee AHỤRỤ kagbuo zara
Biko tinye okwu gị!
Biko tinye aha gị ebe a
I tinyela adreesị ozi-e ezighi ezi!
Biko tinye adreesị email gị ebe a
Bọchị agbanweela: June 29, 2020
Bọchị agbanweela: June 12, 2020
Onye ọ bụla na-agba ọsọ nwere akụkọ nwata. LifeBogger weghaara akụkọ kachasị mma, ihe ijuanya na akụkọ na-adọrọ mmasị banyere kpakpando football site na nwata ruo ụbọchị. Anyị bụ ụwa kachasị mma nke ụwa maka Ụmụaka Akụkọ Gbasara Ịkọwa Ụdị akụkọ nke ndị na-agba ụkwụ gburugburu ụwa.
Kpọtụrụ anyị: lifebogger@gmail.com
Serge Aurier nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
Bọchị gbanwee: Eprel 15, 2020
Carlo Ancelotti Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
Bọchị edoziri: July 2, 2020
Thomas Meunier Nwa akwukwo akuko na ihe omuma
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
David Luiz Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Odighi
Bọchị gbanwee: Eprel 12, 2020